Dad farabadan oo ku dhintay Dhul Gariir ka dhacay dalka Afgaanistaan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dad farabadan oo ku dhintay Dhul Gariir ka dhacay dalka Afgaanistaan
Ugu yaraan 155 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 200 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii dhulgariir xooggan uu ku dhuftay meelo fogfog oo ka mid ah koonfur bari ee Afgaanistaan ​​iyo dalka deriska la ah ee Pakistan, sida uu sheegay maamulka masiibooyinka ee dalka Afgaanistaan.
Madaxa wasaaradda musiibooyinka dabiiciga ah ee maamulka Taliban, Mohammad Nassim Haqqani, ayaa sheegay in dhimashada ugu badan ay ka dhacday gobolka Pakistan, halkaasoo 100 qof ay ku dhinteen 250 kalena ay ku dhaawacmeen.
25 qof oo kale ayuu sheegay in min Shan Ruux ay ku dhinteen Gobolada Khost iyo Nangarhar, isaga oo intaa ku daray in ay wadaan baaritaanno lagu ogaanayo in uu jiro khasaare intaas ka badan.
Sawirro ay soo qaaday Warbaahinta Afgaanistaan ​​ayaa muujinayay guryihii oo gaaray burbur xoogan, waxana weli jirin wax war ah oo ka soo baxay Pakistan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay.
Dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 6.1 magnitude ayaa ku dhuftay meel 44km u jirta magaalada Khost oo ku dhow xuduudka Pakistan, wuxuuna dhul gariirku ka dhacay 51km (31 mayl), sida ay sheegtay hay’adda sahaminta dhulka ee Maraykanka.
Dad farabadan oo ku dhintay Dhul Gariir ka dhacay dalka Afgaanistaan was last modified: June 22nd, 2022 by warsan radio
Jaamacaddii ugu horeysey oo laga hirgaliyey Degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay
Sawiro:Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo gaaray Ceelwaaq
MUSHKILADDA HAAYSATA DIGIL & MIRIFLE AYAGA UUN BAA SAXI KARA.
Axmed Karaash ” Puntland maahan boombale dhabarka lagu qaato ee Ukraine lala aado
Weerar dhimasho badan dhaliyay oo laga fuliyey dalka Canada
Dhageyso: Maamulka Gobolka Hiiraan eedeyay guddiga abaaraha Qaran
Dhageyso;- Barnaamijka Arimaha Bulshada Gaar Ahaan Waxbarashada